War deg deg ah:Kulan Hadda ka Socda Muqdisho iyo Wasiiro khudbado Jeedinaya (Tollow Maxaa Looga Hadlayaa) | Newsomali
War deg deg ah:Kulan Hadda ka Socda Muqdisho iyo Wasiiro khudbado Jeedinaya (Tollow Maxaa Looga Hadlayaa)
War hadda na soo gaaray ayaa sheegaya in kulan ballaaran ka socdo Xarunta ugu weyn ciidamada Amisom magaalada Muqdisho ee Xalane iyadoo kulan loogu dabaal dagayo maalinta Dhowrista Xuquuqul insaanka Caalamka.
Wariyeyaasha ayaa iyagu loo diiday inay duubaan maqal iyo muuqaal intuba iyagoo dhageysanaya kaliya indhahana ka daawanaya siday wax uga socdaan Xarunta Xalane ee Muqdisho.
Wasiirka Wasaarada Hormarinta Adeega Bulshada Maryan Qaasim ayaa khudbad ay ka jeedisay xarunta goor dhaw waxay kaga hadashay dhibaatooyinka loogeysto wariyeyaasha Somaliyeed kuna baaqday in iyaguna ku dadaalaan warka ay tabinayaan in xaqiiqdiisa la hubiyo ka hor inta aysan baahin.
Sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay Wasiirka Wasaarada Boostada,isgaarsiinta iyo Warfaafinta xukuumada Somaliya C/llaahi Ciilmooge Xersi waxaana uu sheegay in wasaaradiisa ay xiriir dhaw la yeelan doonto warfidiyeenada Somaliyeed.
Qaar kamid ah Agaasimayaasha idaacadaha muqdisho,xubno ka socda safiirada Midowga Yurub ee waddamada Africa qaarkood,Xubno ka socda Dawlada Mareykanka,Wasiiro xukuumada Somaliya ah,Ururada Bulshada Rayidka iyo wariyeyaal ayaana kulanka ka qeyb galaya.
Khudbadaha la jeedinayo ayaa waxay ku baxayaaan luuqada English-ka waxaana ilaa hadda soconaya kulanka oo diirada lagu saarayo dhibaatooyinka loogeysto saxafiyiinta Somaliyeed.
Wixii kasoo kordho kulanka,sawirada kulanka iyo khudbadaha qaar dib kala soco insha allah.